President and wife to visit Viet Nam in the near future – Ministry of Foreign Affairs
President and wife to visit Viet Nam in the near future
At the invitation of His Excellency Mr. Tran Dai Quang, President of the Socialist Republic of Viet Nam, U Htin Kyaw, President of the Republic of the Union of Myanmar, and wife Daw Su Su Lwin will payastate visit to the Socialist Republic of Viet Nam in the near future. In conjunction with the state visit, the President will also attend the 8th CLMV Summit, the 7th ACMECS Summit and World Economic Forum on the Mekong Region to be held in Ha Noi.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်နှင်‌့ ဇနီး ဒေါ်စုစုလွင်တို့သည် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ သမ္မတ မစ္စတာ ကျန်းဒိုက်ကွမ်း၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံသို့ မကြာမီကာလအတွင်း တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ဟနွိုင်းမြို့၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် (၈)ကြိမ်မြောက် စီအယ်လ်အမ်ဗွီ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ (၇)ကြိမ်မြောက် အက်မက်စ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်(မဲခေါင်ဒေသ)တို့သို့လည်း ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဥ်နှင့်တစ်ဆက်တည်း တက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်